Ch 3 Asan'ny Apostoly – 2trondro
Home / Baiboly / Asan'ny Apostoly / Ch 3 Asan'ny Apostoly
Asan'ny Apostoly 3
3:1 Ary Petera sy Jaona niakatra ho ao an-kianjan'ny tempoly tamin'ny ora fahasivy fivavahana.
3:2 Ary nisy lehilahy anankiray, izay nalemy tongotra hatrany an-kibon-dreniny, dia nentina tao. Izy ireo hametraka azy isan'andro teo anoloan'ny vavahadin'ny tempoly, izay atao hoe tsara tarehy, ka mba hangataka fiantrana amin'izay niditra teo an-kianjan'ny tempoly.
3:3 Ary io lehilahy io, nony nahita an'i Petera sy Jaona nanomboka ny hiditra ny tempoly, dia nangataka, ka dia mba homena fiantrana.
3:4 Ary Petera sy Jaona, nandinika azy, nanao hoe:, "Mijere anay."
3:5 Ary Jesosy nijery azy tsara amin'ny, fanantenana mba hahazo zavatra taminy.
3:6 Fa hoy Petera:: "Volafotsy na volamena, dia tsy Ahy. Fa izay ananako, No omeko anareo. Amin 'ny anaran' i Jesoa Kristy avy any Nazareta, Mitsangàna ka mandehana. "
3:7 Ary nitondra azy tamin'ny tànany ankavanana, dia nanainga azy ka. Ary niaraka tamin'izay ny tongony sy ny tongony no nampahery.
3:8 Ary niantsambotra izy, dia nijanona izy, dia nandeha manodidina. Ary dia niditra taminy ho eo an-kianjan'ny tempoly, nitsangantsangana ny niantsambotsambotra sady nidera an'Andriamanitra.
3:9 Ary ny vahoaka rehetra nahita azy mitsangantsangana sy midera an'Andriamanitra.
3:10 Ka nahalala Azy;, fa Izy no tsy miova, izay nipetraka teo ny fiantrana am-Itsaraendrika anoloan'ny vavahadin'ny tempoly. Dia raiki-tahotra sy gaga tamin'ny zava-nitranga taminy.
3:11 Avy eo, raha nihazona hatrany i Petera sy Jaona, ny olona rehetra nihazakazaka azy ireo amin'ny lavarangana fidirana, izay atao hoe Solomona, in talanjona.
3:12 fa Petera, nahita izany, namaly ny vahoaka: "Ry Israelita, nahoana no manontany tena amin'izao? Na nahoana no mibanjina anay, toy ny hoe teo akaikin'ny amin 'ny hery na ny fahefana fa nahatonga io lehilahy io mba handeha?
3:13 Ny andriamanitr'i Abrahama sy ny Andriamanitr'i Isaka ary Andriamanitr'i Jakoba, ny Andriamanitry ny razantsika, no nanome voninahitra an'i Jesosy, izay, tokoa, natolotra sy nolavinareo teo anatrehan'i Pilato, rehefa nanome azy didim-pitsarana halefa.
3:14 Dia nandà Ilay Masina sy Marina, dia nangataka ho mpamono olona ny olona mba homena ianareo.
3:15 Marina tokoa, izany no Loharanon'ny Fiainana izay novonoina ho faty, Izay natsangan'Andriamanitra tamin'ny maty, izay ary vavolombelon'izany izahay.
3:16 Ary noho ny finoana ny anarany, io lehilahy io, izay efa hitanay sy fantatra, Nanamafy ny anarany. Ary ny finoana amin'ny alalany no nanome fahasalamana tanteraka ity lehilahy ity eo imason'i anareo rehetra.
3:17 Ary ankehitriny, rahalahy, Fantatro fa nanao izany tsy nahy, tahaka ny mpitondra ihany koa no.
3:18 Fa toy izany ny nahatanterahan'Andriamanitra ny zavatra izay nanambara rahateo tamin'ny alalan'ny am-bavan'ny rehetra ny Mpaminany: fa hijaly i Kristy.
3:19 Noho izany, mibebaka sy hiova fo, ka dia ny fahotanareo, mba ho amin'ny tondro-molotra.
3:20 Ary avy eo, raha ny fotoana ny fampiononana dia efa tonga avy teo anatrehan 'ny Tompo, Izy no haniraka Ilay izay mialoha anao, Jesoa Kristy,
3:21 izay any an-danitra tokoa dia tsy maintsy mitondra, mandra-pihavin'ny andro ny famerenana amin'ny laoniny ny zava-drehetra, izay efa nilaza ny 'ny vavan' ny mpaminaniny masina, hatramin'ny fahagola lasa.
3:22 Tokoa, Ary hoy Mosesy:: 'Fa ny TOMPO Andriamanitrareo no hanangana Mpaminany ho anareo avy amin'ny rahalahy, iray tahaka ahy; dia izy no mihaino ny zava-drehetra na inona na inona araka izay holazainy aminao.
3:23 Ary izao no ho: ny olona rehetra izay tsy hihaino izany mpaminany izany dia tanteraka amin'ny olona. '
3:24 Ary ny mpaminany rehetra izay efa niteny, koa hatramin'i Samoela sy taorian'izay, Efa nanambara izao andro izao.
3:25 Hianareo no zanaky ny mpaminany sy ny fanekena izay efa notendreko ho an'ny razantsika, ka hoy izy tamin'i Abrahama: 'Ary amin' ny taranakao ny firenena rehetra eny ambonin'ny tany dia ho voatahy. '
3:26 Andriamanitra nanangana ny Mpanompony, dia naniraka Azy aloha, ary ho any aminareo, hitso-drano anao, ka dia samy mba hampiala ny tenany hiala amin'ny faharatsiany. "